I-VELMA EKHOKELWA YI-SCOOBY-DOO PREQUEL, CLONE HIGH PHAKATHI KWE-HBO MAX SERIES ORDERS - IINDABA
I-Velma ekhokelwa yi-Scooby-Doo Prequel, Clone High phakathi kwe-HBO Max Series Orders
I-HBO Max yaziswa kwimiyalelo yokuqokelelwa kwemihla ngemihla yokuqokelela i-animated entsha ye-3, kunye neodolo yamaxesha amabini eClone High, uhlaziyo lwamva nje lokuqokelelwa kukaPhil Lord, uChris Miller, kunye noBill Lawrence owayebekwe kwisikolo samabanga aphakamileyo Iiklones zamanani embali.
Wonke umntu uyamthanda uRaymond cast ngoku
Umsasazi ukongeze i-episode episode ye-Warner Bros. Velma yoopopayi, ibali elitsha kraca elihlekisayo elineenkcenkce ze-Scooby-Doo Mystery Inc., uVelma Dinkley, evakaliswe ngumvelisi we-govt uMindy Kaling.
Iphepha lesithathu lelokuFired on Mars, iofisi ekhoyo ehlekisayo eseti imizuzu emi-5 kungekudala okanye kamva, evakaliswe nguPete Davidson (ngoMgqibelo ebusuku).
Kulilungelo elingathethekiyo ukwakha kwiinyanga ezili-12 ezili-12 kunye nelifa 'lekhathuni' kule femu. Sinokuzoba umgca ngokuthe ngqo ukusuka kwiiyure zethu ezininzi zobuntwana ezichithwe ukubukela ii-Bugs zikhupha u-Elmer kwisilayidi yemisebenzi yabantu abadala esiyakhayo apha kwi-HBO Max kwaye silindele ukuba abalandeli baya kuvuma, utshilo uSuzanna Makkos, i-EVP, uMdlalo woqobo kunye noPhilayo lwaBantu abadala, iHBO Max.
Siyazingca ukwazisa ngeli qela lahlukileyo lokuqokelela kwiintlobo ngeentlobo zabadali abanokuthi banike indawo yokuyeka indawo yokuphumla kubathandi bopopayi kuyo yonke indawo.
Nazi iingongoma eziphambili zokutyhilwa.
ICLONE EPHAKAMILEYO -I-odolo yamaxesha amabini Uhlaziyo lwanamhlanje lukaPhil Lord, uChris Miller kunye noBill Lawrence baqokelela ingqokelela ebekwe kwisikolo samabanga aphakamileyo samanani ezembali.
UPhil Lord noChristopher Miller babuya njengabavelisi be-govt kunye nababhali. UBill Lawrence usenokubuya njengomvelisi we-govt kunye no-Erica Rivinoja, (South Park, Borat elandelayo Moviefilm) obhale kwi-Clone High ebuyayo njenge-showrunner.
Ingqokelela iveliswa ziiMTV Entertainment Studios.
VELMA yingqokelela yamahlaya oopopayi ebalisa imvelaphi yebali likaVelma Dinkley, iingqondo ezingaziwayo nezingaxatyiswanga zeqela leScooby-Doo Mystery Inc.
Isipinishi esinyanisekileyo nesihlekisayo esivelisa izinto ezinzima kunye nemibala edlulileyo ethathelwa ingqalelo njengenye yezona zinto zithandekayo ezithandekayo zaseMelika, umvelisi we-govt uMindy Kaling uya kuvakala ngomlingiswa we-titular.
UCharlie Grandy, uHoward Klein kunye neRejista yeSam babhalisa abavelisi bakarhulumente. I-VELMA iveliswa nguWarner Bros. oopopayi.
UQINISEKILE NGOMATSHI Ukusuka kubadali uNate Sherman kunye noNick Vokey, I-FIRED ON MARS yinto ehlekisayo yeofisi esekwe kwikhampasi yaseMartian yenkampani ye-tech yangoku. UPete Davidson uvakalisa ubuntu kunye noRhulumente ovelisa uCarson Mell (iSilicon Valley) kunye noDave Sirus.
Luthini uluvo lwakho malunga nokuqokelelwa koopopayi?
ndingabukela ukulandelelana kwi-netflix
iingcinga ezibulalayo eziphela zichaziwe
bonnie disick ixabiso elifanelekileyo
i-genesis lopez ngaphambi kotyando
ukuthatha umfanekiso ngothando